ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: February 2011
သူများတကာတွေ စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်းရောင်းတဲ့ထဲ ဆေးရိုးသယ်က ကန့်လန့် ကန့်လန့် လို့ပြောခံရဦးမယ်
ဒါ့ကြောင့်ပြောတာ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး အဆိုးမြင်ဝါဒီတွေလို့ ထပ်အပြောခံရဦးမယ်
ရာဇပုလ္လင်ဖင်ကပ်ပါလာတယ်လို့ပဲပြောပြော စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်တယ်ပဲပြောပြော
မိုးပေါ်က ကျလာတဲ့ ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ အမတ်ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြော အမတ်တော့ အမတ်ဖြစ်တာပဲလေ
ဒီတခေတ်မှာ အမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုကတည်းက အမတ်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ပေါ့ဗျာ
ခုတော့..ထစ်ကနဲဆို ကောင်းတယ်လို့ တခါမှ မပြောကြဘူး လို့ပဲဆိုဆို..
ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် လို့ ဆိုပြန်ရင်လဲ ပြောခံရဦးမယ် ငါ့တို့ အမတ်မင်းဆိုတာ ပြည်သူ့ ကိုယ်စား ကိုယ်စားလှယ်တွေကွ
မင်းလို တိုင်းတပါးကျွန် အဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ကိုယ်လုပ်ကိုင်မစားပဲ တိုင်းတပါးမှာ ကျွန်သွားခံတဲ့ သူမဟုတ်ဘူးကွ လို့ အပြော
ခံရမယ် ဆိုရင်လဲ ခံရပေတော့မယ်.
ဧရာဝတီက တင်ထားတဲ့ ကြက်ပြေးနေပြည်တော်က အမတ်မင်းတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုသာ ရှု့စားပါတော့ဗျာ.
ဘယ်က ဘယ်လို ဥပဓိရုပ်တွေလဲဆိုတာတော့..ဗျာ သိတယ်မှလား..
ကချစ်ဖေတို့က နေရာစုံ လပ်လျှားလပ်လျှား လျှောက်သွားဘူးသူဆိုတော့ ပြောရရင်..အဲ..
ဒီ..က ခေါင်း(ဆောင်)တွေလိုလို ဘာလိုလိုဗျာ.
ဗမာစကားတလုံးမှ မတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ယောက်ကို ပြ ကြည့်ရင်လဲ
လူမှာ အ၀တ် တောင်းမှာအကွပ်တဲ့
နဂိုရှိမှ နကိုင်းထွက် သတဲ့..
ဒီလူတွေက လူထု ကိုယ်စားလှယ်တဲ့ဗျာ.ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်တော့ မသိရပါဘူး ပုဂ္ဂိုရေး တိုက်ခိုက်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 7:47 PM , Links to this post ,9comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 2:41 PM , Links to this post ,5comments